“Haamaha Iyo Madaarka Markii La Wareejinayay Hal Qalad Ayaa La Galay, Markii Dekadda La Wareejinayayna Laba Qalad Ayaa La Galay..” Prof. Cabdi Cali – somalilandtoday.com
“Haamaha Iyo Madaarka Markii La Wareejinayay Hal Qalad Ayaa La Galay, Markii Dekadda La Wareejinayayna Laba Qalad Ayaa La Galay..” Prof. Cabdi Cali
Haamaha waan Bogaadinayaa, Hal DP world ahna waan ku darayaa, in yar oo Fiqiga Maamulka ah.
Markaan soo hadal qaado DP world, yaan loo qaadan in aan leeyahay iyadana ha laga noqdo; runtii markaan idiin sheego qaladka dhacay, iyadaa ka sii liidata wareeinita Haamaha iyo madaarka; laakiin mar haddii aynu wax la galay dad ajnabi ah, si aanay inoogu keenin kalsooni darro xagga caalamka ah, waxa odhan lahaa ha la saxo uun.
U dhaq-dhaqaaqa arrimaha bulshada iyo maamul wanaagga.
Waxa Qoray Prof-Abdi Ali Jama